သင်၏နောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းကိုသင်တည်ဆောက်သင့်သလား။ | Martech Zone
မကြာသေးခင်ကငါကုမ္ပဏီတွေကိုအကြံပေးဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးသားခဲ့သည် သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗွီဒီယိုကိုမပြရဘူး။ ဗီဒီယို hosting ၏ကောင်းကျိုးများကိုနားလည်သောနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူအချို့ထံမှ၎င်းအားတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့မှာကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုကပရိသတ်လိုတယ်၊ လက်ခံထားတဲ့ပလက်ဖောင်းတော်တော်များများကအဲဒါကိုပဲပေးတယ်။ ဒါကြောင့် bandwidth ရဲ့ကုန်ကျမှု၊ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆက်သွယ်မှုတို့ဟာပရိသတ်အတွက်ရရှိနိုင်တဲ့အပြင်အဓိကအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တယ်။
ဆိုလိုသည်မှာကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်သူတို့၏အဖြေများကိုတည်ဆောက်ခြင်းကိုကြာကြာမကြည့်သင့်ကြောင်းမယုံကြည်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဗွီဒီယိုဖြစ်လျှင်၊ ကုမ္ပဏီကြီးများစွာသည်သူတို့၏ဗျူဟာနည်းဗျူဟာကိုပေါင်းစပ်ထားသည် ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်များ။ စုံလင်သောအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကကွန်ပျူတာစွမ်းအားသည်အလွန်စျေးကြီးပြီး bandwidth သည်အကုန်အကျများခဲ့ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအစပြုခဲ့စဉ်ကကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြေရှင်းချက်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ရသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအနေဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအနေဖြင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည်ဘီလီယံနှင့်ချီ။ ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့အများစုအသုံးပြုနိုင်သည့်ပလက်ဖောင်းများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ပြန်လာတာမရှိတော့ဘူး၊ မြေကြီးပေါ်ကနေဆင်းလာရင်မင်းကံကောင်းလိမ့်မယ်။
သို့သော်ယနေ့ခေတ်ရှေ့သို့မြန်ဆန်စွာသွားလာနိုင်ပြီးကွန်ပျူတာစွမ်းအားနှင့် bandwidth များပြားသည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုခြစ်ရာကနေမပြုလုပ်နိူင်ပါ။ ထုတ်ကုန်ကိုစျေးသိပ်မကြီးတဲ့အပြင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရအောင်လုပ်တဲ့အစွမ်းထက်မြန်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပလက်ဖောင်းတွေ၊ ကြီးမားတဲ့ဒေတာဘေ့စ်ပလက်ဖောင်းတွေ၊ သတင်းပို့တဲ့အင်ဂျင်တွေရှိတယ်။ စျေးသိပ်မကြီးတဲ့၏ကျယ်ပြန့်အရေအတွက်ကိုဖော်ပြရန်မ API ကို (Application programming interface) ပံ့ပိုးပေးသူများကိုစျေးကွက်ထဲတွင်တင်ထားသည်။ Developer တစ်ခုတည်းက administrative interface နဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပြီးဆက်သွယ်နိုင်သည် API ကို မိနစ်တစ် ဦး အမှု၌တည်၏။
ဆပ် - ကျွန်ုပ်၏သတင်းလွှာကိုထောင်သောင်းချီသော ၀ ယ်ယူသူများကိုထုတ်ဝေသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အတွက်ကြော်ငြာဝင်ငွေရရှိမှုထက်အီးမေးလ်ပံ့ပိုးသူအတွက်ငွေပိုမိုသုံးစွဲခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းနှင့် WordPress သို့တိုက်ရိုက်ပေါင်းစပ်ထားသောအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ လစဉ်နှစ်တိုင်းဒေါ်လာထောင်ချီတဲ့အီးမေးလ်တွေပို့တယ်။ တစ်နေ့ကျရင်ငါတို့ကလူတိုင်းကိုထုတ်လွှင့်မယ်။
SEO ဒေတာ Miner - Highbridge ပထဝီအနေအထားအရ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ခေါင်းစဉ်အလိုက်ခြေရာခံရန်လိုအပ်သောသော့ချက်စာလုံးရေသန်းဝက်ထက်ကျော်လွန်သောအလွန်ကြီးမားသောကြေညာသူတစ် ဦး ရှိသည်။ ဒီကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမယ့်ပံ့ပိုးပေးသူအားလုံးဟာလိုင်စင်အတွက်ဂဏန်းငါးလုံးပါ ၀ င်ပြီးမည်သူမျှသူတို့မှာရှိတဲ့ဒေတာပမာဏကိုကိုင်တွယ်လို့မရပါဘူး။ ထို့အပြင်၎င်းတို့တွင်ထူးခြားသော site တည်ဆောက်ပုံနှင့်စည်သွတ်ဘူးများနှင့်မကိုက်ညီသောစီးပွားရေးပုံစံရှိသည်။ ဒါကြောင့်အခြား software အတွက်လိုင်စင်၏စျေးနှုန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏စီးပွားရေးပုံစံအတွက်တိကျသော platform တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့လုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုင်းသည်သူတို့ဝေးကွာသွားစေမည့်လိုင်စင်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်သူတို့၏ပလက်ဖောင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်၎င်းကိုပြည်တွင်း၌ပိုမိုထိရောက်စွာပြုလုပ်နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ သူတို့ကသူတို့အတွက်စင်မြင့်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်အဖိုးတန်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအချိန်ချွေတာသည်။
အေးဂျင့် Sauce - လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းအာဒံတီထွင်ခဲ့သော Agent Sauce ပလက်ဖောင်းသည်ဝက်ဘ်၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ အီးမေးလ်၊ မိုဘိုင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ အာဒံကအီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးလေ့ရှိပြီး ၄ င်းတို့၏စနစ်ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ခက်ခဲသောအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်အစားသူတည်ဆောက်ခဲ့သည်! သူသည်သူ၏ပလက်ဖောင်းကို APIs များစွာနှင့်အတူလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပြီးအခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ဒေါ်လာရာနှင့်ချီ။ ဒေါ်လာများစွာတန်ဘိုးရှိသည့်အလွန်တတ်နိုင်သောဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ Agent Sauce သည်ယခုအခါဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီသောအီးမေးလ်များနှင့်သောင်းနှင့်ချီသောမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့သည်။ အာဒံသည်ထိုငွေစုငွေများကိုသူ၏ဖောက်သည်များထံတိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင်ခဲ့သည်။
ဤဥပမာများသည်အနည်းငယ်သာသာလွန်သောကန့်သတ်ချက်များရှိသည့်စံပလက်ဖောင်းကိုလိုင်စင်ချပေးမည့်အစားထိုဖြေရှင်းချက်များကို cloud တွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတစ်ခါတစ်ရံအလွန်အားကောင်းတဲ့ APIs များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ User Interfaces များကို application နှင့် user တို့အတွက်သီးခြားပြုလုပ်ထားပါသည်။ data များကို massaging လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ် platform ပြissuesနာများနှင့် ပတ်သတ်၍ အချိန်များစွာကုန်ဆုံးခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အရာအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် process များကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
ခြွင်းချက်ရှိပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်တည်ဆောက်ရန်ရွေးချယ်ကြသည် Content Management System ထိုသို့အိပ်မက်ဆိုးသို့လှည့်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့လုပ်သောအလုပ်ပမာဏနှင့်ရှာဖွေရေးနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအတွက်ဆိုဒ်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးသည့်ထိုစနစ်များတွင်ရှိသည့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့မတွက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်အတွေ့အကြုံမရှိသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်အလွန်သတိထားရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုကိုတည်ဆောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အီးမေးလ်ပို့ခြင်းနှင့်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။
သူများသည်ထိရောက်သောငွေစုကုမ္ပဏီများအတွက်ဘယ်မှာရှိကြ၏။ သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အခါသင်ဒီဟာကိုလေ့လာချင်လိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အကြီးဆုံးလိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်မှာလဲ? ဒီပလက်ဖောင်းတွေရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုကျော်လွှားဖို့သင့်အတွက်ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ။ စျေးကွက်တစ်ခုလုံးထက်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်တည်ဆောက်ထားပါကမည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်မည်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသင်၏ကုမ္ပဏီနားလည်လိမ့်မည်နည်း။ အကယ်၍ သင်သည်နှစ်စဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုသုံးစွဲခဲ့လျှင်စျေးကွက်ဖြေရှင်းချက်များထက်ထုံးစံအတိုင်းပိုမိုကောင်းမွန်သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုသင်မည်မျှမြန်နိုင်မည်နည်း။
ဤသည်မှာသင်သည်အခြားသူတစ် ဦး ၏ဖြေရှင်းချက်ကိုဆက်လက်ဝယ်ယူမည်၊ သို့မဟုတ်သင်နှင့်အတူသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကိုခြေလှမ်းနိုင်ကြောင်းသင်သိသည့်လက်ရာကိုဆက်လက်တည်ဆောက်မလားဆိုသည်ကိုစတင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
Tags: အေးဂျင့်ငံပြာရည်apiအီးမေးလ်ပလက်ဖောင်းတည်ဆောက်ပါတည်ဆောက်သို့မဟုတ်ဝယ်seo ပလက်ဖောင်းကိုတည်ဆောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကုန်ကျစရိတ်ပေါင်းစည်းမှုပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်